Isi Obodo - Ndị ọrụ Nde
Anyị nwere network na mmekọrịta nke siri ike na ụlọ ọrụ ego maka mkpa ego akụrụngwa gị! N'adịghị ka ụlọ ọrụ ego Isi Obodo na-ahụkarị, ndị ọrụ mmekọrịta anyị nwere mmemme maka mmalite yana azụmaahịa guzobere ezigbo otuto. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ ego na-arụ ọrụ na-achọ opekata mpe ọnwa isii na azụmaahịa iji tụlee ndị chọrọ ka ha tozuo maka itinye ego maka agbanyeghị site na njikọta nke a, enwere ike kpaa nkata. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na-arụ ọrụ kacha mma agaghị eme ka ị na-echere, ha ga-achọ ụzọ ọ bụla iji nyere aka na enyemaka ego gị ngwa ngwa o kwere mee!
Akaụntụ E nwetara
Ihe ruru 80% nke uru ihu nke ihe ruru eru inweta enyemaka ahụ
50% ka 70% nke atụmatụ mmiri mmiri na-eme atụmatụ na akụrụngwa
50% na 70% nke liquidation uru akụrụngwa
Inye ego iji zụta ego
Ọzụ ahịa Ego
Ihe owuwu owuwu
Ndị na-emechi akwụkwọ
Commissionlọ Mgbakọ Adlọ
Ruckgba andgbọala na Billgwọ Billgwọ Billgbọ Egwuregwu na andgbọ Ahịa
Ego ahia ahia ahia
Inye ego na Chazụ Azụmaahịa - Dịkwuo Ego Ologbo na-ebuli Isi Obodo Na-arụ Ọrụ
Anyị na-enye aka nka na ọrụ ịnye ego ụtụ maka enyemaka iji nyere ma ndị azụmaahịa na ndị na-eweta ha aka ichebara isi obodo ha na ọrụ ha chọrọ.
Atụmatụ ego anyị na-enye n’onyinye gunyere ahaziri usoro a haziri nke ọma iji mee ka njikọta ala na nke ụlọ sie ike site n’ichebe isi obodo na-arụ ọrụ ma kwe ka azụmaahịa azụmaahịa ka ọ dị ala.